Xog: Xasan Sh oo abaabul Siyaasadeed ka dhan ah Dawladda ka billaabay Tanzania. +Sawiro – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 19, 2017
Madaxwaynihii hore ee Somalia, Xasan Sh Maxamuuud ayaa abaabul uu doonayo inuu qal qal siyaasadeed ku galiyo Dawladda Somalia ka billaabay Wadanka Tanzania oo uu ka dagan yahay Guri uu ka gatay intii uu ahaa Madaxwaynaha Somalia. isagoona Abaabulkan ay gacan ku siinayaan Isbahaysiga Sucuudiga iyo Imaaraadka.
Xog ay heshay Hornafrik ayaa sheegaysa inay ku kulmeen Tanzania Xasan Sh, Madaxwaynaha Koonfur Galbeed Somalia, Shariif Xasan Sh Aadan, Siyaasiyiin uu ka mid yahay CUmar C/rashiid oo Raiisul Wasaare ka ahaa Dawladdii uu Madaxwaynaha ka ahaa Xasan Sh, iyo Xildhibaano kale oo ka tirsan Golayaasha Dawladda. Waxaa sidoo kale Kulamadaasi kala qaybgalay Diblomaasiyiin ka socday Imaaraadka iyo Sucuudiga, iyagoo diyaariyay Shax ay doonayaan inay ku majaxaabiyaan Dawladda Somalia oo haysata oo taageeradda Shacabka.
Hornafrik waxaa sidoo kale loo soo dusiyay mid ka mida Sawiradda Kulankaasi oo aan loogu talagalin Saxaafadda. Waxaana sida ka muuqata Sawirkan ay galeen Kulankooda kadib, iyadoo Sawirkan loogu tagalay in loo diro Dawladda Imaaraadka si ay ugu soo fasaxdo Dhaqaale ay ku majaxaabinayaan Dawladda Somalia.
Kulanka Xasan Sh, Shariif Xasan iyo Xubno kale oo ka dhacay Tanzania.
Shariif Xasan oo Shirkan qayb ka ahaa ayaa loo soo diray Nairobi, si uu halkaasi uga billaabo Abaabul Siyaasadeed uu ku aruurinayo Xildhibaanadda saaxiibadiis. Waxaana Shariifka Nairobi kadib uu sidoo kale imaan doonaa Muqdisho iyo Baydhabo si uu halkaasna uga sii wado Abaabuladda uu ku doonayo in lagu rido Dawladda Somalia.
Xasan Sh oo dhawaan ay Golaha Wasiiradda Somalia ansixiyeen Mushaarkiisa, Isla markaana ka mid ah Baarlamaanka Somalia ayaa hadda Ololihiisa koowaad waxa uu ku doonayaa inuu ku rido Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre, iyagoo kadibna doonaya inay ridaan Madaxwayne Farmaajo. Waxayse Dadka Siyaasadda ka faalooda aaminsan yihiin in Xasan Sh uusan guul ka keeni doonin Isbahaysiyadda Siyaasadeed ee uu hadda abaabulayo, maadaama uusan haysan Aqlabiyadda Baarlmaaanka oo ah kuwii u diiday Codka isaga, Doortayna Madaxwayne Farmaajo oo haysta Taageeradda Shacabka.
Somalia oo diiday inay la safato Wadamadda Imaaraadka iyo Sucuudiga oo xiriirka u jaray Dawladda Qadar ayeey hadda Isbahaysiga Khaliijku doonayaan inay ka abuuraan Fowdo Siyaasadeed.